SAWIRO: Laba Bilood Oo Ay Jaho Wareer Ku Jireen, Ciyaartoyda Liverpool Oo Maanta Helay Farxadii Ugu Horaysay. - Gool24.Net
SAWIRO: Laba Bilood Oo Ay Jaho Wareer Ku Jireen, Ciyaartoyda Liverpool Oo Maanta Helay Farxadii Ugu Horaysay.
Kooxda Liverpool ayaa maanta dib ugu soo laabtay xarunta tababarka kooxdeeda ee Melwood halkaas oo ay tababar ku qaadanayaan xidigaha kooxdu markii ugu horaysay muddo laba bilood ka badan.
Shalay ayaa loo balansanaa in kooxaha Premeir League ay dhamaantood ku soo laabtaan xarumaha tababarka oo ay sameeyaan tababarkii ugu horeeyay laakiin xidigaha Reds oo shalay soo gaadhay Melwood ayaan tababarka samayn waxaana jiray hawlo kale oo ay kooxdu haysay.
Laakiin saaka waxay Jurgen Klopp, shaqaalaha tababarka iyo ciyaartoyda kooxda kowaad markii ugu horaysay iskugu soo galeen xarunta tababarka Melwood oo ay kubbada kuwada shaqeeyeen.
Sida uu dhigayo sharciga tilmaamaha caafimaad ee ay kooxaha Premier League iyo maamulkoodu isla ansixiyeen, waxay koox kastaaba ciyaartoyda kooxdeeda u qaybinaysaa min shan ciyaartoy waxayna isku jirsanayaan min 2 mitir oo fogaan ah.
Liverpool oo tilmaamahan caafimaad raacaysa ayaa markii ay Klopp iyo ciyaartoyda kooxdu soo galeen Melwood waxay bilaabeen in ay ciyaartoyda u kala jabiyaan groupyo yar yar kuwaas oo iyaga laftooda loo dhexaysiiyay fogaan ku filan in ayna istaaban.
Inkasta oo ciyaartoyda kooxda Liverpool noqdeen kuwo gabi ahaanba ka badqaba cudurka Karoonaha, haddana sharciga caafimaad ayaa dhigaya in ciyaartoydu ayna wajiga kowaad ee tababarka isku soo dhawaan.
Liverpool waxay ka soo baxday waqti aad u adag waxayna dad waynaha aduunka iyo kooxaha kale ee dhibaatada Fayraska u xanibnaa ay dheerayd in marar badan uu jiray olole shaki badan lagu galinayay in koobka ay gacanta ku sii dhigeen loo diiyay balse taasi waxay maanta ciyaartoyda kooxda Reds u noqotay wax ay si buuxda uga bogsadeen.
Intii lagu jiray go’doonkii Fayraska, waxay ciyaartoyda Liverpool qaadanayeen waqti adag iyaga oo xanibaada caafimaad ee la saaray ay u dheerayd ka fikirka waxa ay kala kulmi doonaan dhamaystir la’aantii Premier league ee uu shakigu hadheeyay.
Laakiin maanta farxad gaar ah ayay u ahayd ciyaartoyda kooxda Liverpool iyo taageerayaasha kooxdooda markii ay arkeen iyada oo Melwood ay noqotay goob caadi ku soo noqotay muddo laba bilood ka badan.
Soo laabashada kooxaha Premeir League waa talaabadii kowaad ee looga shaqaynayo in kulamada baaqiga ah loo qabto waqti ku haboon markaas oo ay Liverpool u baahan doonto in ay laba kulan oo kaliya guulaysto si ay koobka shakiga badani ka soo galay meel iskaga saaraan.
Haddaba halkan kaga bogo qaar ka mid ah sawiradii ciyaartoyda Liverpool maanta looga qaaday Melwood.
Virgir Van Dijk
Jurgen Klopp iyo caawiyihiisa Pep Lijnders.
Trent Alexander-Arnold iyo Dejan Lovern.
Taageere Liverpool ah oo canugiisa yar madaxa ku qaaday si uu indhaha ugu saaro in ciyaartoydii Liverpool ay Melwood ku soo laabteen.